Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. ऋण नतिरेको भन्दै गरिवको घरमा डोजर – Emountain TV
ऋण नतिरेको भन्दै गरिवको घरमा डोजर
महोत्तरी, २८ साउन । बैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक साउदी उडाएको पैसा नदिएको भन्दै महोत्तरीमा मेनपावरका एजेन्टले एक गरीबको घर डोजर लगाएर भत्काएका छन् । महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका १ कविलासा पूर्वारीटोलका मोहम्मद पनित शेखको घर स्थानीय एजेन्ट बद्री ठाकुरले डोजर लगाएर भत्काएका हुन् ।
बैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि दिएको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै मेनपावरका एजेन्ट बद्री ठाकुरले डोजर लागएर घर भत्काएका हुन । ऐजेन्टले सम्पूर्ण परिवारलाई घरबाट निकाला गरी एकाएक डोजर चलाएर घर भत्काएपछि जाहिरा खातुन अहिले विचल्लीमा परेकी छिन् । घर भत्काएपछि सम्पूर्ण परिवार विस्थापित भएका छन् ।
उनीहरु अहिले सडकमा त्रिपालको ओत लगाएर बसेका छन् । साउने झरीमा पनि पालमा बस्न बाध्य छन् । मुस्लिमहरुको महान् पर्व बकर इद मनाइरहेका बेला उनीहरु घरबारबिहीन भएका छन् ।
पीडित जाहिराका अनुसार उनका श्रीमान् अहिले पनि साउदी अरबमा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । आठ वर्ष अघि एजेन्ट बद्री ठाकुरले शेखलाई २० हजार रुपैयाँमा राम्रो काम र कमाई हुने कम्पनीमा विदेश पठाइदिने बताएपछि उनी विदेश गएका थिए ।
तर शेखले त्यहाँ गएपछि राम्रो काम र तलब पाएनन् । पीडित जाहिराका अनुसार पति शेख विदेश गएपछि आफ्नो ससुरा अहम शेखसंग एजेन्ट ठाकुरले छलेर ८५ हजार रुपैयाँको तमसुक बनाए । त्यही पैसाको व्याजको स्याज गरी एजेन्ट ठाकुरले मोटो रकम मागिरहेका थिए । उनले जिल्ला अदालत महोत्तरीमा मुद्दा समेत दिएका थिए ।
जाहिराका अनुसार केही वर्ष अघि एजेन्ट ठाकुर राति राति घरमा पसेर ऋण छोडिदिने भन्दै अनैतिक सम्बन्धको प्रस्ताव गरेका थिए । तर होहल्ला गरेपछि उनी भागेका थिए ।
जसको समाजमा पञ्चायत समेत भएको थियो । त्यो रिसीबी साध्नलाई समेत घर भत्काएको हुन सक्ने केही स्थानीयको भनाईलाई भँगहा नगरपालिका वडा नं. १ को वडाध्यक्ष नवल किशोरले पुष्टी गरेका छन् ।
यता भंगहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख संजिवकुमार साह आफुले दुवै बिचको लेनदेनको मुद्दा मिलाउन तीन पटक पहल गरेको, तर मुद्दा अदालतमा गएकाले आफुले केही गर्न नसकेको बताउनु हुन्छ ।
महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले घटनाको विषयमा थोरै जानकारी भएको बताए । पीडितले उजुरी नदिएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीको भनाई छ ।
पर्साको झौवागुठीका वासिन्दा सधैजसो सीमा बिवादको समस्यामा